China FK-Q600 Aka ẹkenịmde ọgụgụ isi Agrometeorological gburugburu ebe obibi factory na-emepụta | Chuanyunjie
• ala mmesho uzo di iche iche: - 40-120 ℃ ziri ezi: ± 0.2 ℃ mkpebi: 0.01 ℃
Ala mmesho nso: 0-100% ziri ezi: ± 3% mkpebi: 0.1%
• ala salinity nso: 0-20ms nkenke: ± 2% mkpebi: ± 0.1ms
• ala pH mmesho nso: 0-14 ziri ezi: ± 0.2 mkpebi: 0.1
Ala nkenke omimi: 0-450mm nso: 0-500kg; Nkenke 0-50000kpa: na kg: 0.5kg na nrụgide: 50kp
• ikuku ikuku ikuku: - 30 ～ 70 ℃ ziri ezi: ± 0.2 ℃ mkpebi: 0.01 ℃
• ikuku iru mmiri: 0-100% ziri ezi: ± 3% mkpebi: 0.1%
Ìhè siri nso: 0 ～ 200klux nkenke: ± 5% mkpebi: 0.1klux
• carbon dioxide mmesho nso: 0-2000ppm ziri ezi: ± 3% mkpebi: 0.1%
Photosynthetic irè radieshon nso: 400-700nm uche: 10-50 μ V / μ mol · m-2 · S-1
• windo ọsọ ọsọ dị iche iche: 0-30m / s ziri ezi: ± 0.5% mkpebi: 0.1m / s
• ikuku mmesho uzo ozo: uzo 16 (360 Celsius) ziri ezi: ± 0.5% mkpebi: 0.1%:
• oke mmiri ozuzo: 0 .. 01mm ～ 4mm / minzi ezi: ± ± 3% mkpebi: 0.01mm
• usoro nkwukọrịta: USB, Rred RS485, wired na GPRS
• USB: waya ikuku nke mmiri nke 2m, 2m okpomọkụ polytetrafluoroethylene waya dị elu na-eguzogide ọgwụ.
• mmesho usoro: tinye ụdị, ụdị e liri, profaịlụ, wdg
• ọnọdụ nnweta ike: batrị lithium
• Enwere ike ịgbakwunye modulu GPS na GPRS
(1) A nwere ike ịhazi olu, GPS, ntinye data GPRS na ọrụ ndị ọzọ dịka mkpa onye ọrụ si dị;
(2) Obere ike imewe, dịkwuo usoro nrụpụta nchedo ọrụ, gbochie ike obere circuit ma ọ bụ mpụga nnyonye anya mmebi, zere usoro okuku;
(3) LCD nwere ike igosipụta oge ugbu a, ihe mmetụta na uru ọ tụrụ, ike batrị, ọnọdụ olu, ọnọdụ GPS, ọnọdụ netwọk, ọnọdụ tfcard, wdg;
(4) Nnukwu ikike lithium ike batrị, na inyefe batrị na ọrụ nchedo zuru oke;
(5) A ga-akwụ ụgwọ akụrụngwa na ike pụrụ iche, nkọwapụta nkwụnye ọkụ bụ 8.4v / 1.5a, ụgwọ zuru ezu na-ewe ihe dịka 3.5H; n'oge odori, nkwụnye na-acha ọbara ọbara na zuru ụgwọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
(6) A na-eji interface USB iji kwurịta okwu na kọmputa, nke nwere ike ibupụ data ma hazie parameters;
(7) Nnukwu ikike nchekwa data, nhazi TF Kaadị nchekwa data na-akparaghị ókè;
(8) Ntọala mkpu nke ihe ọmụma banyere gburugburu ebe obibi dị mfe na ngwa ngwa;
(9) The interface nwere GPRS on / anya ntuziaka nhọrọ;
A na-ejikarị ya arụ ọrụ ugbo, oke ohia, nchedo gburugburu ebe obibi, nchekwa mmiri, ụlọ ọrụ ihu igwe, mmiri mmiri na-azọpụta mmiri, nyocha ala, ịkọ ihe ubi na ubi ndị ọzọ.
Nke gara aga: Portable akwukwo ebe detector YMJ-B
Osote: FK-CT10 Onye nchoputa ihe omimi nke ala
Akụrụngwa nyocha ihu igwe
Obere Ugbo Anyanwu
Akụrụngwa Nyocha Weather
Njirimara arụmọrụ 1.Highly integrated design, integrated mkpoko usu, 4G wireless data nkwukọrịta, ngwa anya eriri na network cable nkwurịta okwu. O nwekwara ike weputa ihe ngosi protocol MODBUS 485 ozugbo, enwere ike iji ya dị ka ihe mmetụta ọnụọgụ ọtụtụ jikọtara na PLC / RTU onye ọrụ na ndị nchịkọta ndị ọzọ. 2. O nwere ike inyocha gburugburu ebe obibi ifufe ọsọ, ifufe direction, ikuku okpomọkụ, ikuku iru mmiri, igirigi ebe t ...